နိုင်ငံခြားသားပါမောက္ခများ အရှိုက်ထိသွားသော အဖြစ်အပျက် - Barnyar Barnyar
April 28, 2022 linn htet Religious 0
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အဆက်မပြတ် ရောက်လာနေကြတယ်။ ရောက်လာရင် အများအားဖြင့် ရွှေတိဂုံဘုရား ပုဂံဘုရားများ မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရား စစ်ကိုင်းဘုရားများကို လည်ပတ်ဖူးမြော်ပြီး အဆင်သင့်ရင် တောင်ကြီးနဲ့ အင်းလေးကန်သို့ တစ်ရက်သွားလည်ကြတယ်။
ပြီးတော့ ပြန်ကြတာပဲ။ မကြာသေးမီ အချိန်က အင်္ဂလိပ် ပါမောက္ခ နှစ်ယောက်နဲ့ အမေရိကန် ပါမောက္ခနှစ်ယောက်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာကြတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ဘုရားဖူးကြတဲ့အခါ ‘အုတ်ပုံစေတီကို လူတို့က ပန်းပူဇော်တာ မီးပူဇော်တာ ရှိခိုးတာတွေဟာ ဘာအကျိုးကျေးဇူး ရှိသလဲ’ လို့ တွေ့တဲ့လူကြီးတွေကို မေးကြတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို မေးတယ်ဆိုတော့ မြန်မာဂေါပကလူကြီးတို့က ဖြေဖို့ ခက်နေကြတယ်။ အဲ . . . ဆူးလေဘုရားကို ပါမောက္ခအဖွဲ့ ရောက်လာကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သူတို့ရဲ့မေးခွန်းကို ဂေါပကလူကြီးများကို မေးတယ်။
လူကြီးတွေက စေတီရင်ပြင်မှာ နေ့စဉ် တစ်နေကုန် ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်နေတဲ့ မစ္စတာဘဲလူးကို အခေါ်ခိုင်းလိုက်ကြတယ်။ မစ္စတာ ဘဲလူးဟာ ဘရုတ်ကင်း အင်္ဂလိပ်ရှ် (Broken English) တော်တော်ပြောနိုင်တာကိုး။
မစ္စတာဘဲလူး ရောက်လာတဲ့အခါ အမေရိကန်ပါမောက္ခက မေးတယ်။
Why do you worship this Pagoda? ဒီစေတီကို သင်တို့ ဘာကြောင့် ကိုးကွယ်ကြသလဲ။
This Pagoda is made of bricks. ဒီစေတီဟာ အုတ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတယ်။
Your houses are made of bricks. သင်တို့ရဲ့အိမ်များကို အုတ်နဲ့ပဲ ပြုလုပ်ထားကြတယ်။
And your offices are made of bricks. ပြီးတော့ သင်တို့ရဲ့ရုံးများကိုလဲ အုတ်နဲ့ပဲ ပြုလုပ်ထားကြတယ်။
What is the difference? ဘာခြားနားမှု ရှိသလဲတဲ့။ အဲဒီအခါ မစ်စတာဘဲလူးက အမေရိကန်ပါမောက္ခကို ပြန်မေးတယ်။
Do you haveawife, mister? ဆရာ . . . သင့်မှာ ဇနီးမယား ရှိသလား။ Oh yes. အို . . . ရှိတာပေါ့။
Do you have mother? သင့်မှာ အမေရှိရဲ့လား။ Oh yes, I have. ဟ. . . ရှိတာပေါ့ကွာ။
Do you have sister? သင့်မှာ ညီမကော ရှိသလား။ Oh yes. အို . . . ရှိပါတယ်။
Now at night with whom do you sleep? ကဲ . . . မိုးချုပ်တဲ့အခါ သင် ဘယ်သူနဲ့ အိပ်သလဲ။
Of course, I sleep with my wife. ဟာကွာ . . . ငါ့ဇနီးနဲ့အတူ ငါအိပ်တာပေါ့။
Why don’t you sleep with your mother? သင့်အမေနဲ့ ဘာကြောင့် အတူမအိပ်သလဲ။
Why don’t you sleep with your sister? သင့်နှမနဲ့ ဘာကြောင့် အတူမအိပ်သလဲ။
Your mother is woman. သင်ရဲ့အမေဟာ မိန်းမပဲ။ Your sister is also woman. သင့်နှမကလဲ မိန်းမပဲ။
And your wife is woman. ပြီးတော့ သင့်ဇနီးကလဲ မိန်းမပဲ။ What is the difference? ဘာခြားနားမှုရှိသလဲ။
အဲဒီအခါ အမေရိကန်ပါမောက္ခက မျက်လုံးမျက်ဆံပြူးပြီး ပြောလိုက်တယ်။ Oh boy, I get your point. ဟုတ်ပြီကွာ မင်းဆိုလိုတာကို ငါ နားလည်ပြီ။
မစ္စတာဘဲလူး နှာနှပ်ပေးလိုက်တာ အနောက်နိုင်ငံသားပါမောက္ခတွေ မေးခွန်းထပ်မမေးနိုင်ကြတော့ဘဲ
နှုတ်ပိတ်ပြီး ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ ထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်။
အခြားဘာသာ အယူရှိကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတို့ဟာ စေတီကို အုတ်ပုံလို့ မြင်နေကြတယ်။
သစ္စာလေးပါးကို မြင်သိတဲ့ ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တာကို သူတို့ မမြင်နိုင်ကြဘူး။
ဒီဉာဏ်တော်တို့ဟာ ထိပ်တန်းအကျဆုံး အမြတ်ဆုံး ဉာဏ်တော်များဖြစ်ကြလို့ ဒီဉာဏ်တော်ဆီသို့ အာရုံညွှတ်သွားနိုင်တယ် ဆိုရင်ပဲ ကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင်ပဲ ကြီးကျယ်တဲ့ ကုသိုလ်ကံ စေတနာတွေ ကုဋေချီပြီး ဖြစ်ပေါ်လာကြတာကို သူတို့ မသိကြဘူး။
(ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၏ မြတ်ဗုဒ္ဓ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းပါ) မေတ္တာဖြင့် Ashin Thumingala
နိုငျငံခွားသားပါမောက်ခမြား အရှိုကျထိသှားသော အဖွဈအပကျြ
ယခုအခါ မွနျမာနိုငျငံသို့ နိုငျငံခွားသားတှေ အဆကျမပွတျ ရောကျလာနကွေတယျ။ ရောကျလာရငျ အမြားအားဖွငျ့ ရှတေိဂုံဘုရား ပုဂံဘုရားမြား မန်တလေးမဟာမွတျမုနိဘုရား စဈကိုငျးဘုရားမြားကို လညျပတျဖူးမွျောပွီး အဆငျသငျ့ရငျ တောငျကွီးနဲ့ အငျးလေးကနျသို့ တဈရကျသှားလညျကွတယျ။
ပွီးတော့ ပွနျကွတာပဲ။ မကွာသေးမီ အခြိနျက အင်ျဂလိပျ ပါမောက်ခ နှဈယောကျနဲ့ အမရေိကနျ ပါမောက်ခနှဈယောကျတို့ မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျလာကွတယျ။
ထုံးစံအတိုငျး ဘုရားဖူးကွတဲ့အခါ ‘အုတျပုံစတေီကို လူတို့က ပနျးပူဇျောတာ မီးပူဇျောတာ ရှိခိုးတာတှဟော ဘာအကြိုးကြေးဇူး ရှိသလဲ’ လို့ တှတေဲ့လူကွီးတှကေို မေးကွတယျ။
အင်ျဂလိပျလို မေးတယျဆိုတော့ မွနျမာဂေါပကလူကွီးတို့က ဖွဖေို့ ခကျနကွေတယျ။ အဲ . . . ဆူးလဘေုရားကို ပါမောက်ခအဖှဲ့ ရောကျလာကွတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး သူတို့ရဲ့မေးခှနျးကို ဂေါပကလူကွီးမြားကို မေးတယျ။
လူကွီးတှကေ စတေီရငျပွငျမှာ နစေ့ဉျ တဈနကေုနျ ဝယြောဝစ်စပွုလုပျနတေဲ့ မစ်စတာဘဲလူးကို အချေါခိုငျးလိုကျကွတယျ။ မစ်စတာ ဘဲလူးဟာ ဘရုတျကငျး အင်ျဂလိပျရျှ (Broken English) တျောတျောပွောနိုငျတာကိုး။
မစ်စတာဘဲလူး ရောကျလာတဲ့အခါ အမရေိကနျပါမောက်ခက မေးတယျ။
Why do you worship this Pagoda? ဒီစတေီကို သငျတို့ ဘာကွောငျ့ ကိုးကှယျကွသလဲ။
This Pagoda is made of bricks. ဒီစတေီဟာ အုတျနဲ့ တညျဆောကျထားတယျ။
Your houses are made of bricks. သငျတို့ရဲ့အိမျမြားကို အုတျနဲ့ပဲ ပွုလုပျထားကွတယျ။
And your offices are made of bricks. ပွီးတော့ သငျတို့ရဲ့ရုံးမြားကိုလဲ အုတျနဲ့ပဲ ပွုလုပျထားကွတယျ။
What is the difference? ဘာခွားနားမှု ရှိသလဲတဲ့။ အဲဒီအခါ မဈစတာဘဲလူးက အမရေိကနျပါမောက်ခကို ပွနျမေးတယျ။
Do you haveawife, mister? ဆရာ . . . သငျ့မှာ ဇနီးမယား ရှိသလား။ Oh yes. အို . . . ရှိတာပေါ့။
Do you have mother? သငျ့မှာ အမရှေိရဲ့လား။ Oh yes, I have. ဟ. . . ရှိတာပေါ့ကှာ။
Do you have sister? သငျ့မှာ ညီမကော ရှိသလား။ Oh yes. အို . . . ရှိပါတယျ။
Now at night with whom do you sleep? ကဲ . . . မိုးခြုပျတဲ့အခါ သငျ ဘယျသူနဲ့ အိပျသလဲ။
Of course, I sleep with my wife. ဟာကှာ . . . ငါ့ဇနီးနဲ့အတူ ငါအိပျတာပေါ့။
Why don’t you sleep with your mother? သငျ့အမနေဲ့ ဘာကွောငျ့ အတူမအိပျသလဲ။
Why don’t you sleep with your sister? သငျ့နှမနဲ့ ဘာကွောငျ့ အတူမအိပျသလဲ။
Your mother is woman. သငျရဲ့အမဟော မိနျးမပဲ။ Your sister is also woman. သငျ့နှမကလဲ မိနျးမပဲ။
And your wife is woman. ပွီးတော့ သငျ့ဇနီးကလဲ မိနျးမပဲ။ What is the difference? ဘာခွားနားမှုရှိသလဲ။
အဲဒီအခါ အမရေိကနျပါမောက်ခက မကျြလုံးမကျြဆံပွူးပွီး ပွောလိုကျတယျ။ Oh boy, I get your point. ဟုတျပွီကှာ မငျးဆိုလိုတာကို ငါ နားလညျပွီ။
မစ်စတာဘဲလူး နှာနှပျပေးလိုကျတာ အနောကျနိုငျငံသားပါမောက်ခတှေ မေးခှနျးထပျမမေးနိုငျကွတော့ဘဲ
နှုတျပိတျပွီး ခေါငျးတညိတျညိတျနဲ့ ထှကျခှာသှားကွတော့တယျ။
အခွားဘာသာ အယူရှိကွတဲ့ နိုငျငံခွားသားတို့ဟာ စတေီကို အုတျပုံလို့ မွငျနကွေတယျ။
သစ်စာလေးပါးကို မွငျသိတဲ့ ဗုဒ်ဓဉာဏျတျောနဲ့ သဗ်ဗညုတဉာဏျတျောကို ကိုယျစားပွုတဲ့ အထိမျးအမှတျဖွဈတာကို သူတို့ မမွငျနိုငျကွဘူး။
ဒီဉာဏျတျောတို့ဟာ ထိပျတနျးအကဆြုံး အမွတျဆုံး ဉာဏျတျောမြားဖွဈကွလို့ ဒီဉာဏျတျောဆီသို့ အာရုံညှတျသှားနိုငျတယျ ဆိုရငျပဲ ကွညျညိုစိတျဖွဈသှားတယျ ဆိုရငျပဲ ကွီးကယျြတဲ့ ကုသိုလျကံ စတေနာတှေ ကုဋခြေီပွီး ဖွဈပျေါလာကွတာကို သူတို့ မသိကွဘူး။
(ဒေါကျတာမငျးတငျမှနျ၏ မွတျဗုဒ်ဓ စာအုပျမှ ကူးယူဖျောပွခွငျးပါ) မတ်ေတာဖွငျ့ Ashin Thumingala